Nov 8, 2012 na 10:57 AM
Nnukwu ojiji nke okwu egwuregwu bọọlụ iji mee ka isi okwu gị mara banyere omume ụlọ njikọ ọma na nke ọjọọ n'ụzọ pụrụ iche. Ọbụghị onye ofufe Peyton Manning (nke si New England) mana enwere m ike ịghọta ya! Ihe kachasị m mma bụ "ịgbasa bọl gburugburu". Iji meziwanye ọhụhụ gị ma nweta njikọ, ị kwesịrị ị na-enweta ọdịnaya ngwaahịa na akụrụngwa weebụ na-abụghị nke gị.
Akwa isiokwu na njikọ njikọ. Aga m agha iji usoro a.